FAMPANDROSOANA NY FIRENENA : Misokatra ny fiaraha-miasa eo amin’i Alemana sy i Madagasikara
Varavarana mankany amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara iray hafa indray no nisokatra nandritra ny dian’ny Filoha Andry Rajoelina tany Genève-Suisse. 13 juin 2019
Ankoatra ny fivoriamben’ ny asa natrehiny tany an-toerana dia nihaona ary nifampidinika mivantana tamin’ny Chancelière Alemana, Angela Merkel ihany koa ny tenany. Ity farany izay tsy nisalasala ny nanokatra fiaraha-miasa amin’i Madagasikara. Efa nifampidinihan’ny roa tonta nandritra ity fihaonana voalohany ity ny mahakasika ny fampiroboroboana ny sehatry ny angovo, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny lafiny fanabeazana.
Fantatra fa handefa delegasionina avy amina minisitera maromaro ho any Alemana ny fitondram-panjakana hijery fiaraha-miasa matotra sy maharitra ho fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta. Firenen-dehibe maro manerana an’izao tontolo izao ankehitriny no manaiky hifanome ny hanolo-tanana an’i Madagasikara.
Samy resy lahatra ny rehetra fa manana vinam-pampandrosoana matipaika ny mpitondra izay azo tanterahina tsara sy mendrika ny homena tohana. Ao aorian’ny dian’ireto delegasionina ireto dia heverina fa hivaingana sy azo tsapain-tanana ny fifampitokisam-piaraha-miasa eo amin’i Alemana sy i Madagasikara.